SAMSUNG က ML-1520P များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Samsung က ML-1520P များအတွက် installation ကိုဆော့ဖျဝဲ
သငျသညျသစ်တစ်ခုပရင်တာကိုဝယ်ယူလျှင်သင်ကညာဘက်ယာဉ်မောင်းကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးပြီးနောက်, ဒီ software ကို device ကို၏မှန်ကန်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာစစ်ဆင်ရေးသေချာပါလိမ့်မယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်ရန်နှင့်သင့်ပရင်တာကို Samsung ML-1520P များအတွက် software ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Samsung က ML-1520P အပေါ်ပရင်တာဒရိုင်ဘာကိုတပ်ဆင်ရန်
ဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်ရန်နှင့်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ် device ကို configure မှတလမ်းတည်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန် - သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အသေးစိတ်ထွက်ရှာရန်။
ဟုတ်ပါတယ်, drivers တွေကို device ကိုထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှာနေ start သငျ့သညျ။ ဤနည်းလမ်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာကူးစက်များ၏အန္တရာယ်မရှိဘဲဆော့ဖ်ဝဲများ၏မှန်ကန်သော installation ကိုသေချာ။
ပေးထားသောလင့်ခ်ကနေတဆင့်တရားဝင် Samsung က website ကိုသွားပါ။
စာမျက်နှာရဲ့ထိပ်မှာခလုတ်ကိုရှာ "ပံ့ပိုးမှု" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဤတွင်ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ, သင့်ပရင်တာမော်ဒယ်ရိုက်ထည့် - အသီးသီး ML-1520P။ ထိုအခါစာနယ်ဇင်း ဝင်ရောက် ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များအသစ်တစ်ခုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအကြိုးရလဒျနှစ်ပိုင်းခွဲခြားဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိစေခြင်းငှါ - "ညွှန်ကြားချက်များ" နှင့် "ဒေါင်းလုဒ်များ"။ ကျနော်တို့ဒုတိယစိတ်ဝင်စား - ခလုတ်ကိုအပေါ်နည်းနည်းဆင်း scroll နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "View အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို" သင်၏ပရင်တာအဘို့။
ဘယ်မှာအပိုင်းတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုကိရိယာတစ်ခုစာမျက်နှာ, "ဒေါင်းလုဒ်များ" သင်လိုအပ်သော software ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပိုပြီး»ကိုကြည့်ပါကွဲပြားခြားနားသော operating system မြားအတှကျအပေါငျးတို့သရရှိနိုင် software ကိုတွေ့မြင်ရန်။ သင်ခလုတ်ကို download, ကိုကလစ်နှိပ်ပါအဘယ်သို့ software ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ "ဒေါင်းလုပ်" သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသည်မှနောက်လာမည့်။
ဆော့ဖ်ဝဲဒေါင်းလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပါကကို double-click နှိပ်. ဒေါင်း installation ဖိုင်ကို run ။ သငျသညျရွေးချယ်ရမည်ရှိရာ installer ကို, ဖွင့်ပါ "Install" နှင့် button ကို click "အိုကေ".
ထိုအခါသင်ကကြိုဆိုပြတင်းပေါက် installer ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်သဘောတူညီချက်တွေ့နိုင်ပါသည်နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း။ ပစ္စည်းကို tick "ကျွန်မဖတ်ပါနှင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံကြပြီ" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Next ကို".
လာမယ့် window ထဲတွင်သင်မောင်းသူကို install လုပ်ဖို့ရွေးချယ်စရာရွေးနိုင်သည်။ ထိုသို့အဖြစ်ကိုသင်အရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာနိုင်ပြီး, လိုအပ်သောလျှင်သင်အပိုဆောင်းပစ္စည်းရွေးနိုင်သည်။ ထို့နောက်တဖန်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
အခုတော့ကိုယ့် drivers တွေကို install လုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းနှင့်သင်သည်သင်၏ပရင်တာကို Samsung ML-1520P စမ်းသပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
Method ကို 2: ယာဉ်မောင်းများအတွက် Global Search
သင်တို့သည်လည်းအသုံးပြုသူများကိုယာဉ်မောင်းကိုရှာကူညီရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောအစီအစဉ်များကိုတဦးကိုသုံးနိုင်သည်: သူတို့အလိုအလျှောက်စနစ် scan နှင့်ယာဉ်မောင်းမွမ်းမံရန်လိုအပ်သည့်စက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲကိုတစ်ဦး uncountable အစုံတည်ရှိဒါကြောင့်လူတိုင်းကသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အဆင်ပြေဖြေရှင်းချက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤအစီအစဉ်၏လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်နဲ့သုံးစွဲဖို့ရာဦးတည်းဆုံးဖြတ်ရသောအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေ:
အဆိုပါ DriverPack Solution မှတ်ချက် -
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပေါ်ပြူလာဖြစ်သောရုရှားထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများ။ ဒါဟာမျှမျှတတရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ interface ကိုရှိပြီးအများဆုံးကွဲပြားခြားနားပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ယာဉ်မောင်း၏အကြီးဆုံးဒေတာဘေ့စတစျခုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါသည်။ နောက်ထပ်သိသာအားသာချက်သင်အသစ်များဆော့ဖျဝဲ၏ installation start ရှေ့တော်၌ထိုအစီအစဉ်ကိုအလိုအလျှောက် Restore point တစ်ခုဖန်တီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ် drayverpak အကြောင်းကိုဖတ်ပါနှင့်အလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, သင်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာနိုင်ပါလိမ့်မည်:
Method ကို 3: ID ကိုဆော့ဖျဝဲခြင်းဖြင့်ရှာရန်
တစ်ခုချင်းစီကို device ကိုယာဉ်မောင်းများအတွက်ရှာဖွေသည့်အခါတွင်လည်းသုံးနိုငျသောမူထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားရှိပါတယ်။ သင်ရုံထဲမှာ ID ကိုရှာတွေ့ဖို့လိုအပ် "Device Manager" တွင် "Properties ကို" စက်ကို။ ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့တာဝန်ရိုးရှင်းနိုင်ရန်အတွက်အလိုရှိသောတန်ဖိုးများကို Pre-select လုပ်ပါ:
အခုတော့ကိုယ့်ကိုသင် ID ကိုဆော့ဖျဝဲခြင်းဖြင့်ရှာဖွေခွင့်ပြုထားတဲ့အထူးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါနှင့်, installation wizard ကို၏ညွှန်ကြားချက်များကိုအောက်ပါယာဉ်မောင်းထည့်သွင်းပါ။ အခြို့သောအမှုအရာသည်သင်တို့အတွက်ရှင်းလင်းကျန်ရစ်ခဲ့ကြလျှင်, ဘာသာရပ်အပေါ်အသေးစိတ်သင်ခန်းစာနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်သေချာစေပါ:
Method ကို 4: အဆိုပါစနစ်သည်စံ tools များ
ငါတို့သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းပြီးခဲ့သည့် option ကို - ဆော့ဖ်ဝဲ standard Windows ကိရိယာတွေသုံးပြီးကိုယ်တိုင် install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းလမ်းကိုခဲအသုံးဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သူ့အဘို့လည်းသိကြသင့်ပါတယ်။
သွားကြဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ "Control Panel ထဲက" သက်သာခံစားရပေးသောမည်သည့်နည်းလမ်း။
ထို့နောက်အပိုင်းကိုရှာဖွေ "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ"ထိုသို့မှတ် "View devices များနှင့်ပရင်တာများ".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, သင်ကအပိုင်းသတိထားမိစေခြင်းငှါ "ပုံနှိပ်", ထိုကိရိယာ၏လူသိများစနစ်၏အားလုံးဖော်ပြပေးဘယ်။ ဤစာရင်းတွင်သင့်ရဲ့ devaysa မပါရှိလျှင်, ဒီ link ကို click နှိပ်ပြီး "ပရင်တာဖြည့်ထည့်" အဆိုပါ tabs များအထက်။ ပရင်တာအချိန်ကြာမြင့်စွာထူထောင်ကြောင့်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သငျသညျ, ဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ယာဉ်မောင်းကို update လိုအပျကွောငျးချိတ်ဆက်ပရင်တာအဘို့သင်၏ system စတင်စကင်ဖတ်ဖို့။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများပုံပေါ်ပါကကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်ခလုတ်ကို "Next ကို"အားလုံးလိုအပ်သော software ကို install လုပ်ရန်။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်သင့်ရဲ့ပရင်တာပေါ်လာမပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက် link ကို click နှိပ်ပြီး "ဒီလိုအပ်သောပရင်တာစာရင်းမနေသည်" ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်။
ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းရွေးချယ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကို USB ကိုအသုံးပြုလျှင်နှိပ် "ဒေသခံတစ်ဦးပရင်တာ Add" နောက်တဖန်ပေါ် "Next ကို".
Next ကိုကျနော်တို့ဆိပ်ကမ်းကိုသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းသည်။ သငျသညျအထူးတဲ့ pop-up menu ကိုတစ်ဦးကို item ကို select, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်တစ်ဦးဆိပ်ကမ်းကို add နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်တစ်ဦးမောင်းသူလိုအပ်သော device ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ပြတင်းပေါက်၏လက်ဝဲအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထုတ်လုပ်သူကို select -Samsung ကနှင့်လက်ျာ - မော်ဒယ်။ စာရင်းအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုအမြဲတမ်းပြန်တစ်ခုခုမဖြစ်ကတည်းကသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်Samsung က Universal ပုံနှိပ်ပါယာဉ်မောင်း 2- တစ်လောကလုံးပရင်တာဒရိုင်ဘာ။ နောက်တဖန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
နောက်ဆုံးခြေလှမ်း - ပရင်တာ၏နာမကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သငျသညျကို default value ကိုစွန့်ခွာနိုင်ပေမယ့်သင်မဆို၎င်း၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို" နှင့်ယာဉ်မောင်း၏ installation သည်အထိစောင့်ပါ။
သငျသညျမွငျနိုငျအတိုင်း, သင်တို့၏ပရင်တာပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်ရှုပ်ထွေးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာတစ်တည်ငြိမ်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အနည်းငယ်သည်းခံခြင်းလိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးသင်ပြဿနာဖြေရှင်းကူညီပေးခဲ့တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် - မှတ်ချက်များအတွက်ရေးနှင့်ကျွန်တော်ပြန်သင်ရလိမ့်မယ်။